Climate activists march through the streets of Glasgow, Scotland, Friday, Nov. 5, 2021 which is the host city of the COP26 U.N. Climate Summit. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's bigges
ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတု ညီလာခံ - COP26 မှာ လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးကနေ ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်
စကော့တလန်က Glasgow မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ ညီလာခံ - COP26 ရဲ့ ခန်းမတွင်းမှာကော ခန်းမအပြင်ဖက်မှာပါ လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးကနေ ရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ အတူတကွ ခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုမှာ ထင်ရှားသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Greta Thunberg ကတော့ အခုညီလာခံမှာ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။
“ဘာအတွက် ကျမတို့ တိုက်ပွဲဝင်နေသလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ကြရမှာပါ။ ကျမတို့ ကိုယ့်ဖာသာ ကယ်တင်ဖို့လား၊ ကမ္ဘာကြီး ရှင်သန်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလား၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပဲ နေကြဖို့လား။ ကျမတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ ၂ ခုစလုံး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေ့မှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ လက်ခံဖို့ခက်တဲ့ အမှန်တရားပါ။” လို့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Thunberg ကပြောသွားတာပါ။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲဒီညီလာခံမှာ မနေ့သောကြာနေ့က လူငယ်တွေကို အဓိက ဦးတည်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ အစီအစဉ်တွေမှာ လူငယ်တွေ အခန်းကဏ္ဍ အားနည်းနေတာကိုလည်း လှုပ်ရှားသူတွေ ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုမှာ လူငယ်တွေရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ပြောကြားပေမဲ့ စင်မြင့်ပေါ်က ဦးဆောင်ပြောသူတွေထဲမှာတော့ အသက် ၃ဝ အောက် လူငယ်တယောက်မှ မပါခဲ့ကြပါဘူး။
စကော့တလနျက Glasgow မွို့မှာ ကငျြးပတဲ့ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှု ဆိုငျရာ ညီလာခံ - COP26 ရဲ့ ခနျးမတှငျးမှာကော ခနျးမအပွငျဖကျမှာပါ လူငယျတကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ နိုငျငံတကာခေါငျးဆောငျတှအေနနေဲ့ ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှုရဲ့ အဖွဈဆိုးကွီးကနေ ရှောငျရှားနိုငျအောငျ ကမ်ဘာခေါငျးဆောငျတှအေနနေဲ့ အတူတကှ ခိုငျခိုငျမာမာဆောငျရှကျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ ရာသီဥတုဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုမှာ ထငျရှားသူ တဦးဖွဈတဲ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျ Greta Thunberg ကတော့ အခုညီလာခံမှာ ထိထိရောကျရောကျ ဆောငျရှကျနိုငျတာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုပွီး ဝဖေနျခဲ့တာပါ။
“ဘာအတှကျ ကမြတို့ တိုကျပှဲဝငျနသေလဲဆိုတာ မေးခှနျးထုတျကွရမှာပါ။ ကမြတို့ ကိုယျ့ဖာသာ ကယျတငျဖို့လား၊ ကမ်ဘာကွီး ရှငျသနျရေးအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနကွေတာလား၊ လုပျရိုးလုပျစဉျအတိုငျးပဲ နကွေဖို့လား။ ကမြတို့ရဲ့ ခေါငျးဆောငျတှကေတော့ ၂ ခုစလုံး ဖွဈနိုငျပါတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တကယျ့လကျတှမှေ့ာ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတာကတော့ လကျခံဖို့ခကျတဲ့ အမှနျတရားပါ။” လို့ တကျကွှလှုပျရှားသူ Thunberg ကပွောသှားတာပါ။
ကုလသမဂ်ဂရဲ့အဲဒီညီလာခံမှာ မနသေ့ောကွာနကေ့ လူငယျတှကေို အဓိက ဦးတညျခဲ့ပမေယျ့ လကျတှေ့ အစီအစဉျတှမှော လူငယျတှေ အခနျးကဏ်ဍ အားနညျးနတောကိုလညျး လှုပျရှားသူတှေ ထောကျပွခဲ့ကွပါတယျ။ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတခုမှာ လူငယျတှရေဲ့ပါဝငျပတျသကျမှုကို ပွောကွားပမေဲ့ စငျမွငျ့ပျေါက ဦးဆောငျပွောသူတှထေဲမှာတော့ အသကျ ၃ဝ အောကျ လူငယျတယောကျမှ မပါခဲ့ကွပါဘူး။